के मेरी छोरी आफ्नो खुट्टा भित्री भित्र हिड्छ? आमाहरु आज
किन मेरी छोरी आफ्नो खुट्टा भित्री भित्र हिड्छ?
एलिसिया टोमेरो | 11/10/2021 10:00 | सुझावहरू, विकास, परिवार, स्वास्थ्य
यदि तिम्री छोरी आफ्नो खुट्टामा हिँड्छिन्, उनी पीडित हुन सक्छन् एक intrarotation समस्या। तपाइँ पक्कै याद गर्नुहुनेछ कि उहाँ यो स्थिति र दुबै खुट्टाको अब विकास गर्दै हुनुहुन्छ हिड्न थालेको छ। वा किनकी तपाइँ देख्नुहुन्छ कि कसरी अन्य बच्चाहरु समस्या को यस प्रकार संग सामना गरीरहेका छैनन्।
त्यहाँ केटाहरु र केटीहरु छन् जो विचलन को यस प्रकार को शुरू हुन्छ जन्मनु भन्दा पहिले र अरुको यो विशेषता स्वाभाविक रूप मा 8 बर्ष भन्दा पहिले स्वाभाविक छ। अन्तर रोटेशन स्वाभाविक रूपमा सच्याउँछ, यद्यपि केहि मामिलाहरुमा यो एक लगातार प्रतिक्रिया छैन त्यसैले उपचार को केहि प्रकार गर्नु पर्छ।
1 कारणहरु किन तपाइँ भित्र आफ्नो खुट्टा संग हिंड्नुहुन्छ
2 Anteversion र torsion को लागी उपचार
कारणहरु किन तपाइँ भित्र आफ्नो खुट्टा संग हिंड्नुहुन्छ
विभिन्न विचलनहरु विभिन्न कारणहरु बाट आउन सक्छन्। एक विशेषज्ञ द्वारा एक परीक्षा गरेर, यो भविष्यवाणी गर्न सम्भव छ कस्तो प्रकारको आन्तरिक रोटेशन यो विचलन उत्पन्न गर्दछ।
Femoral anteversion यो3र 10 बर्ष को बीच intrarotation को कारणहरु मध्ये एक हो। बारेमा घुँडा र खुट्टा को एक विचलन भित्री खुट्टा को फीमर हड्डी को एक विकृति द्वारा उत्पन्न।
अस्तित्व को निदान गर्न सक्षम हुन औपचारिक मरोड़ विशेषज्ञले केटीलाई उसको पेटमा राख्नेछन् र हिपको आन्तरिक रोटेशन जाँच गरिनेछ। यी अवस्थामा, यो कसरी प्रमाणित गरिनेछ फीमर अगाडि अनुहार सामान्य भन्दा धेरै। यी बच्चाहरु उनीहरु भुइँमा बेहोस भएर डब्लु, जहाँ आमा बुबाले त्यसो गर्न विरुद्ध सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ। यो मोड़ र नराम्रो मुद्रा क्रमशः र समय संगै सच्याउनु पर्छ। यदि केटी १० बर्ष भन्दा माथिको उमेर मा पुगिसकेको छ भने, विशेषज्ञले यसलाई सही गर्न को लागी एक सम्भावित शल्यक्रिया को आकलन गर्न सक्छन्।
टिबियल मरोड़ आन्तरिक हुन्छ जब केटी हिँड्छ आफ्नो खुट्टा संग २ बर्ष पछि। उनको पूर्वानुमान पहिले जस्तै उस्तै तरिका मा मूल्या be्कन गरिनेछ, केटी अनुहार तल राखीनेछ र मूल्या be्कन गरिनेछ टिबिया को रोटेशन जो खुट्टा को भित्री मोड को लागी मुख्य कारण हुनेछ। यो घुमाउने समय संग सुधार गर्न को लागी जान्छ, जहाँ तपाइँको मुद्रा सामान्यतया स्वाभाविक रूप बाट सही हुन्छ।
Anteversion र torsion को लागी उपचार
हामीले पक्कै प्रमाणित गरेका छौं कि हाम्रो छोरी खुट्टा हिँड्छ वा उसको एउटा खुट्टा संग। परामर्श को यो प्रकार बाल रोग विशेषज्ञ को लागी एक यात्रा को लागी मोडिनु पर्छ। यदि यो समस्या पत्ता लगाइएको छ, यो समस्या को मूल्यांकन को अर्को प्रकार बनाउन को लागी आवश्यक हुन सक्छ। पछि, को भ्रमण एक बच्चा traumatologist।
एक पूर्ण स्क्यान गर्न को लागी गरिनेछ आफ्नो मुद्रा को चरण को आकलन, र घटना मा कि तथ्यहरु परामर्श मा स्पष्ट गरीएको छैन, तपाइँ अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ कि एक भिडियो रेकर्डि much धेरै राम्रो कसरी त्यो विचलन स्पष्ट गर्न को लागी बनाइन्छ।
हामी दुबै और्विक anteversion र tibial torsion समीक्षा गरीएको छ सामान्यतया समय संगै थप हलचल बिना सुधार गरीन्छ। उनीहरुलाई कुनै उपचार को आवश्यकता छैन, तर यदि केटी हिड्ने समस्या को एक धेरै छ, समस्या व्युत्पन्न गर्न सकिन्छ एक आर्थोपेडिस्ट को। यो गैर-निर्धारित उपचार को कुनै पनि प्रकार गर्न को लागी उचित छैन।
त्यहाँ केसहरु छन् जसमा सुधारात्मक जुत्ताहरु, जोडने बारहरु संग विशेष जूताहरु, टोर्सन केबल वा सुदृढीकरण को केहि प्रकार को उपयोग गरीएको छ। साधारणतया उनीहरु धेरै प्रभावकारी ढंगले काम गर्दैनन् किनभने उनीहरु समस्या को अन्य प्रकार को लागी नेतृत्व गर्न सक्छन् जहाँ यो प्रभावित गर्न सक्छ बच्चा को सामान्य व्यायाम को लागी, आफ्नो खेल र अन्य बच्चाहरु संग सामाजिक अन्तरक्रिया गर्न।
जब बर्षहरु बितिसकेका छन् र केटीले आफ्नो खुट्टा को मुद्रा सच्याएको छैन, उनी लाई पठाइन्छ सम्भव शल्यक्रिया यसलाई ठीक गर्न। यो intrarotation को यो समस्या को बारे मा अत्यधिक चिन्ता गर्न आवश्यक छैन, उनको आन्दोलन वा खेल मा केटी लगातार यो समस्या मा ठोकर्न सक्छ, तर समय संगै यो आफैं सच्याउँछ।
दुबै केटा र केटीहरु भित्री अनुहार खुट्टा बाट पीडित छन् उनीहरु सामान्य जीवन बिताउन सक्छन् र खेल को कुनै पनि प्रकार को अभ्यास। यदि यो विचलन हो भने चिन्तित नहुनुहोस् भविष्यलाई असर गर्न सक्छ। यो गठिया को रूप मा अन्य प्रकार को रोगहरु बाट पीडित संग पर्याय छैन, न त त्यहाँ संयुक्त समस्या वा पछाडि रोगहरु छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: आज आमाहरू » हेरचाह » स्वास्थ्य » किन मेरी छोरी आफ्नो खुट्टा भित्री भित्र हिड्छ?
के यो गर्भावस्था को समयमा पेट मा गर्मी लागू गर्न को लागी हानिकारक छ?
किन म सजीलै बच्चाहरु पाउन सक्दिन
शिशुहरू, आमाहरू र परिवारमा नवीनतम लेखहरू पाउनुहोस्।